နဝဒေးဘောလုံးကွင်းတွင် ဆောက်လုပ်နေသည့် ပွဲကြည့်စင်သုံးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံ?? - Yangon Media Group
နဝဒေးဘောလုံးကွင်းတွင် ဆောက်လုပ်နေသည့် ပွဲကြည့်စင်သုံးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံ??
နဝဒေး ဘောလုံးကွင်းတွင် ဆောက်လုပ် နေသည့်ပွဲကြည့်စင်သုံးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ နဝဒေးဘောလုံးကွင်း အတွင်းတွင် ဆောက်လုပ်နေသည့် ပွဲကြည့်စင်သုံးလွှာမှ အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ပြုတ်ကျ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းအရ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်စစ်ဆေး ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အခင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ အသက် (၄၅) နှစ်ခန့်ရှိ အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအပြင် ၎င်းနေရာအနီး နေထိုင်သူများ၏ပြောပြချက်အရ နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲကျော်က ဆောက်လက်စ ဒုတိယထပ်လှေကားဘေးရှိ ငြမ်းစင်များလှုပ်ခတ်သွားသဖြင့်သွား ရောက်ကြည့်ရှုစဉ် အဆိုပါအမျိုး သားမှာတိုက်အောက်ကြမ်းပြင်၌ ဘေးစောင်းအနေအထားဖြင့်လဲ ကျသေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။ ယင်းသေဆုံးသူ၏အမည်နှင့်လိပ်စာကို မသိရသေးသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံး၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ၎င်း၏ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြထားကာ သိရှိသူများဆက်သွယ်ကြရန် ပန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ”ဘယ်သူဘယ် ဝါမှန်းမသိရသေးဘူး။ သိရင်အ ကြောင်းကြားပေးဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာအကြောင်းကြားထားတယ်။ဆောက်လုပ်စသုံးလွှာပေါ်တက် ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်။ သူ့ဆီမှာ ကွမ်းစားထားရှိတယ်။ ကွမ်းယာကို အိတ်ထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်။ ကွမ်းတံတွေးထွေးရင်းနဲ့ ချော်ကျတယ်လို့ယူဆရတယ်။ အပေါ်ကိုဘာကြောင့် တက်တာလဲဆိုတာက အပေါ်ကိုလာကြည့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အလုပ်လာတောင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်က ပြောသည်။ ယင်းဆောက်လက်စ သုံးလွှာတွင်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်၌ အလုပ်လုပ်နေသူများမရှိဘဲ နှစ်လွှာတွင် သာအလုပ်လုပ်နေသူများရှိပြီး သေ ဆုံးသူတက်လာသည်ကို မည်သူ မျှမမြင်မိကြောင်း မရမ်းကုန်း မြို့မ ရဲစခန်း၏ စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။ ယင်းသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှ သေမှု သေခင်းအမှတ်စဉ် (၁/ ၂ဝ၁၈) ဖြင့် ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ်၊မဟုတ် စစ်ဆေးနေသည်။
ကျောက်မဲမြို့ တောင်သူများထံမှသိမ်းယူသွားသည့် လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး သတင်းစာရှင်းလင??
Myanmar Idol Season2Winner သားငယ်၏ တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ထွက်ရှိမည်